बढ्दो भ्रुण हत्याले महँगिँदै मधेसका महिला - Arthatantra.com
सप्तरी । तराई मधेसमा छोरीको संख्या पहिलेको तुलनामा न्यून हुदै गएको छ। तराई मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसी बाहुन, यादव, देव, कायस्थ, राजपुत, साह, दासलगायत अधिकांश जातमा पाँच वर्ष अगाडिसम्म पनि दाईजो नलिएर छोरीको बिवाह हुन मुस्किल थियो । तर, पाँचको वर्षको बीचमै आश्चार्य लाग्ने गरी परिवर्तन आएको छ । राजविराज-६ की ६७ वर्षीय उर्मिला देवका अनुसार अहिले दाईजोविनै छोरीको विवाह गर्न सकिने अवस्था छ । बरू छोराको विवाह गर्न गार्हो हुन थालेको देवको अनुभव छ।
राजविराज नगरपालिका-२ की ६५ वर्षीया अम्बिका देवका अनुसार पहिले पहिले शिक्षित, सक्षम, आत्मनिर्भर छोरी भए पनि केटी पक्षले नै गएर दाईजोसहित प्रस्ताव गर्नुपर्ने बाध्यता थियोे । तर, पनि प्रस्ताव स्वीकार गराउँन सजिलो थिएन् । किन भने केटीवालाको ओइरो लाग्थ्यो । दाइजोसहित केटी छानेर केटापक्षले विवाह गर्न पाउँथे।छोरीकावलाहरू सबैको मुखमा हुन्थ्यो, मेरी छोरीको लागि एउटा केटा खोज्नु न १ु तर, अहिले त्यस्तो नरहेको राजविराज-५ की ४५ वर्षीया सुनिता देवले बताईन् । उनले भनिन्,झअहिले मेरी छोरीको लागि केटा खोजी दिनु न भन्ने पर्दैन । मेरो छोराको लागि संक्षम केटी खोजिदिनु, दाईजो नलिई विवाह गर्छु भन्ने दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
राजविराज नगरपालिका-२ की कबिता झाले पनि दुई वर्षयता एक दर्जन भन्दा बढी छिमेकी, चिनजान भएका आफन्तलगायतले छोराका लागि संक्षम केटी खोजिदिन आग्रह गरेको बताइन् । शिक्षित र संक्षम केटी पाएमा दाईजो नलिई विवाह गर्न शुरूमै प्रतिबद्ध रहेको झाको भनाइ छ। उनी थप्छन्, झहिजोआज मेरो छोरीको लागि केटा खोजिदिनुस् कसैले भन्दैनन् । सबैले छोराको लागि केटी खोजिदिनु भन्छन्।
राजविराज-७ की सुनिता साहकी एक छोरा र चार छोरी छन् । छोरो जेठो हो र उनी ईन्जिनियर हुन् । छोरी बिएस्सी नर्सिङ पढेकी छिन्। माईली छोरी इन्जिनियरिङ अन्तिम वर्षमा छिन् । साइली आईएस्सी गर्दैछिन् । कान्छी भर्खरै स्कूल पढ्दैछिन् । एउटा छोरोपछि लगातार चार छोरी जन्मिदा उनीहरूको विवाह कसरी गर्ने कहाँबाट दाईजो ल्याउने रु भनेर उनी पहिला निकै चिन्तित हुन्थिन् । उनले भनिन,झअहिले ठीक उल्टो भएको छ । छोराको विवाह गर्नु पर्ने दाईजो नलिई विवाह गर्न तयार भए पनि बुहारी भेट्न गार्‍हो भएको छ। बरू जेठी र माहिली छोरीसँग दाईजो नलिई विवाह गर्ने प्रस्तावहरू धमाधम आउन थालेको साहले बताइन ।
यस्तै, नगरिक समाज सप्तरीका अध्यक्ष थानसिंह भंसाली आगामी दिनमा छोराको विवाह गर्न केटी पाउन गार्हो हुने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । छोरीको संख्या कम भएपछि उनीहरूको माग बढ्नु स्वभाविक भएको भंसालीको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा ६ सय ५३ ,जना २०७६र७७ मा चार सय २५ जना र आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा ६ सय पाँच जना महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका निमित्त प्रमुख दुनियाँलाल यादवले बताए।
वि.सं.२०७८ कात्तिक ३० मंगलवार १४:४२ मा प्रकाशित
अघिल्लाे आठ जीवन बीमा कम्पनीको नाफा ४५ करोड ३८ लाख: सूर्या लाइफको सबैभन्दा बढी, कुन-कुन देखिए अब्बल ?
पछिल्लाे सिटिजन्स बैंकको २६ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा: प्रतिकित्ता २०४ रुपैयाँ, कहिलेसम्म दिने आवेदन ?
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले कमायो १९ करोड ६४ लाख बढी नाफा, कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
वि.सं.२०७९ जेठ १५ आइतवार ११:३७
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को...
वि.सं.२०७९ जेठ १५ आइतवार १०:५८
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन सुनको मूल्यमा थपघट भएको...